Sida loo qaabeeyo kombiyuutarka Windows: tallaabo tallaabo tallaabo ah. | Wararka Gadget
Eder Esteban | | hardware, Tababarada
Hawsha aad hubaal qaban doonto mar uun waa in la qaabeeyo kumbuyuutar. Qaabaynta darawalka adag waxay ka kooban tahay tirtirka wax kasta oo ku keydsan. Waa geedi socod u baahan kara in lagu fuliyo wakhti cayiman. Laakiin, waxaa jira adeegsadayaal aan si fiican u aqoon sida tan loo samayn karo.
Sidaa darteed, hoosta waxaan ku tusaynaa tillaabooyinka la raacayo qaab kombiyuutar Windows ah. Mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ayaa ah inaan leenahay habab kala duwan oo aan ku qaban karno. Marka waxaad ka heli kartaa mid ku habboon waxa aad raadineyso xaalad kasta.
Sidaan soo sheegnayba, kiiskan waxaan diirada saareynaa qaab kombiyuutar Windows ah. Haddii waxa aad rabto ay tahay qaab Mac ahXiriirinta aan hadda kaaga tagnay, waxaad ku arki kartaa sida loo sameeyo haddii kumbuyuutarkaagu ka socdo Apple. Mid ka mid ah su'aalaha ugu horreeya ee adeegsadayaal badani leeyihiin ayaa ah sababta tan loo sameeyo. Waxaan ka jawaabi doonnaa su'aasha hoose.
1 Maxaa loo qaabeeyaa kombiyuutarka?
2 Samee Kayd
3 Qaabee Kumbuyuutarkaaga: Habka Degdegga ah ee ku jira Windows-ka
4 Qaab adeegso Maareeyaha Disk
5 Qaab ku xafid faylashaada
Maxaa loo qaabeeyaa kombiyuutarka?
Sababta ay u qaabeynta kombiyuutarka u noqon karto mid aad u kala duwan. Dhinac, waa wax aan qabanno haddiiba ay jireen dhibaato xoog leh oo xagga qalabka ah. Sidan oo kale, markii la qaabeynayo, wax kasta oo ku jira waa la masaxaa waxayna ku sii jirtaa isla xaaladdii markii aan iibsanay. Wax ka caawiya inay si fiican mar labaad u shaqeyso, caadi ahaan. Waa la samayn karaa markii aad qabtid fayras, oo aadan ka takhalusi karin.
Sidoo kale haddii ay tahay kumbuyuutar si tartiib tartiib ah u shaqeynaya, mararka qaar waxaa jira adeegsadayaal sharad ku gala farsamadan Ama haddii aad go'aansatay inaad iibiso kombuyuutarkaaga, qaabeynta ayaa xaqiijineysa taas wax xog ah ama faylal ah kuma sii jiri doonaan. Sidaa darteed, qofka iibsadaa ma heli doono marin iyaga u ah.
Laakiin waxaa muhiim ah in la xusuusto in qaabeynta kumbuyuutarka ay sidaas tahay dhammaan faylasha ku jira waa la tirtiri doonaa. Markaa waa nidaam aad u gardarro badan, waana inaan fulinno inaan hubinno inay tahay xalka lagama maarmaanka u ah kiiskeenna.
Sidaa darteed, ka hor inta aynaan bilaabin qaabeynta kumbuyuutarka, gurmad ayaa loo baahan yahay dhammaan faylasha. Nasiib wanaag, taageeriddu waa wax aad u fudud, iyo inaan horeyba kuu tusnay. Markaa waa muhiim in tan la sameeyo, haddii ay dhacdo inaadan rabin inaad lumiso mid ka mid ah faylasha ku jira kumbuyuutarkaaga xilligaas.
Qaabeynta kumbuyuutarkeena Windows waxaan fursad u leenahay gurmad samee hab fudud, haddii aad isticmaasho Windows 10. Markaa waa wax aad gacanta ku qaban karto. Haddii kale, waxaad marwalba haysataa suurtogalnimada inaad adeegsato barnaamijyada khadka tooska ah ee kaa caawiya hawshan.
Qaabee Kumbuyuutarkaaga: Habka Degdegga ah ee ku jira Windows-ka
Si loo qaabeeyo kombuyuutar waxaan leenahay habab kala duwan. Mid ka mid ah siyaabaha, oo u taagan inuu ahaado mid dhakhso badan, waxaa horey loogu soo bandhigay Windows 7. Weli waxay ku jirtaa noocyadii ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka waxayna noo oggolaanayaan inaan howshan ku qabanno si dhab ah oo fudud. Looma baahna in barnaamijyo dheeri ah lagu rakibo kombiyuutarkaaga.
Waxa ay tahay inaan sameyno, mar markaan qabanay keydka kumbuyuutarka, waa inaan aado galka My Computer. Dhexdeeda, dhammaan drives adag oo aan rakibnay kumbuyuutarka. Waa inaan helnaa midka aan dooneyno inaan qaabeyno waqtigan. Markaad joogtid, ku dhagsii badhanka midig ee midig.
Marka xigta, waxaad helaysaa menu macnahiisu yahay xulashooyin taxane ah shaashadda. Mid ka mid ah ayaa ah qaabaynta, taas oo ah inaan ku riixno. Waxaan markaa ka heli doonnaa daaqad leh xogta ku saabsan qaabeynta, iyo xagga hoose badhanka Start. Dhagsii badhanka habka qaabeynta ayaa markaa bilaabmi doona.
Sidaad arki karto, qaabkan loo qaabeeyo kombuyuutarka Windows waa mid aad u fudud. In kastoo, ay wanaagsan tahay in taas la xusuusto nidaamkan laguma fulin karo wadaha meesha nidaamka hawlgalka lagu rakibay in aad isticmaasho waqtigaas. Haddii aad isku daydo, farriin ayaa ka soo muuqan doonta shaashadda taas oo kuu sheegaysa inaysan macquul ahayn.
Qaab adeegso Maareeyaha Disk
Hab kale oo laga heli karo Windows-ka, oo aad waxtar u leh haddii aad dhowr dirawal oo adag ku haysato kombiyuutarkaaga, waa in la isticmaalo maareeyaha diskiga. Nidaamku uma sahlana sidii doorashadii hore. Sidaa darteed, waa qaab loo qaabeeyey kuwa adeegsada ee khibradda yar leh. In kastoo, markaad aqriso sida ay u shaqeyso, ma ahan inay taasi noqoto mid cakiran.
Si aad u hesho Maareeyaha Disk, waa inaad qortaa diskmgmt.msc ama Maareynta Disk ee baarka raadinta. Doorashadan ayaa markaa ka soo muuqan doonta shaashadda. Waa inaad doorataa ikhtiyaarka la yiraahdo Abuur oo qaab u samee qormooyinka darawalka adag. Haddii aad rabto, waxaan sidoo kale ka mari karnaa marinkan: Guddi xakamaynta> Nidaamka iyo amniga> Qalabka maamulka.
Marka xigta waxaan hubinaynaa in diskiga aan dooneyno inaanu qaabeyno uu shaashada ku jiro. Waxay kuxirantahay cabirka, waxaan u isticmaali doonnaa nooc ka mid ah xijaab kiiskan. Haddii ay ka sarreyso 2 TB waa inaan isticmaalnaa GPT. Halka haddii ay ka yar tahay qaddarkan, waa inaan isticmaalno MBR. Markii aan meel ku helnay diskiga, midig guji meesha aan laqeexin ee diskiga la yiri. Kadib dooro ikhtiyaarka loo yaqaan 'New Simple Volume'. Kadib xulo cabirka qeybta udhaxeysa MB iyo xarafka aad siineyso diskkaan cusub.
Kadib, waxaad awoodi doontaa inaad qaabeyso diskiga. Kaliya midig u guji waditaanka su'aasha oo xulo xulashada qaabka. Waxay noo ogolaaneysaa inaan qaabeyno diskiga oo dhan ama qeyb uun, waxaad dooran kartaa waxa adiga kugu habboon markaasi. Habkani wuxuu noo ogolaanayaa inaanu qaabeyno kumbuyuutar, in kastoo xaaladdan aan uga sii gudbeyno cutub ilaa cutub.
Qaab ku xafid faylashaada
Ugu dambeyntiina, hab loo qaabeeyo kombiyuutarka Windows 10, laakiin lagu xafido faylashaada. Tani waa qaab ku jira nooca ugu dambeeya ee nidaamka qalliinka. Thanks iyada, waxa aan sameyneyno ayaa ah kumbuyuutarka ku soo celi xaaladdiisii ​​hore, laakiin adigoon tirtirin feylasha aan ku dhex leenahay. Marka waxaa loo soo bandhigay ikhtiyaar weyn in la tixgeliyo.
Si tan loo sameeyo, waxaan galnaa qaabeynta Windows 10. Kadib, waa inaad gashid cusboonaysiinta iyo qaybta amniga, taas oo badiyaa ka mid ah kuwa ugu dambeeya shaashadda. Qeybtaan gudaheeda, waxaan eegnaa sadarka bidix. Laga soo bilaabo xulashooyinka jira, guji soo kabashada.
Marka xigta waxaad arki doontaa ikhtiyaar la yiraahdo Reset PC. Waa ta ina danaynaysa kiiskan. Sidaa darteed, guji bilawga si aad u bilowdo hawsha. Waxa xiga Weydiin doonaa waa haddii aan rabno inaan xafidno feylasha iyo in kale. Waxaan dooranay ikhtiyaarka aan dooneyno howshana way bilaaban doontaa. Marka, waxa aan qabaneyno waa qaabeynta kumbuyuutarka, laakiin annaga oo aan luminin faylasha aan hayno.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tababarada » Sida loo qaabeeyo kombiyuutarka
Victor Solis: p fiiro gaar ah
Ka faa'iideyso qiimo dhimista alaabooyinka 'Koogeek' ee Amazon